Selivunyelwe ibhola ezigabeni eziphansi - Impempe
Selivunyelwe ibhola ezigabeni eziphansi
February 9, 2021 Impempe.com
UDominic Chimhavi okhulumela iSAFA
Igcagcele esokeni emaqenjini ama-amesha kanjalo noseshini bebhola elingakhokheli kulandela ukuthi iSouth African Football Association (Safa) iqaqe amaketango abeboshwe ngenxa yeCovid-19.
Kusukela kuqale ukubhebhetheka ngamandla kwe-Covid-19, ibhola lama-amesha belimisiwe. Amaligi asemaphandleni, emahositela kanjalo namaligi asemalokishini okuhlanganisa nalawa okuthiwa awama-‘khehla’ abevalwe thaqa okuyinto ebiyinkinga kwazise vele nezwe belivalekile ngenxa ye-lockdown.
Ngokwesitatimende esikhishwe yiSouth African Football Association (SAFA), amaqembu ebhola lama-amesha asengaqala ukuziqeqesha kusukela ngoLwesibili ngoba imidlalo nayo yonke imiqhudelwano izovunyelwa ukuqala ekuqaleni kwenyanga ezayo.
Kulesi sitatimende esikhishwe yiSAFA ngoLwesibili, ithe izolokhu iyibuyisa kancane kancane imidlalo kodwa konke lokhu izokwenza ikuqaphe ngeso lokhozi ukuthi imigudu yokuvikela ukubhebhethekisa iCovid-19 iyalandelwa yini.
“Kubalulekile futhi kuwumsebenzi wamaqembu ukuthi aqinisekise ukuthi imigudu iyalandelwa. Lokhu akugcini ngabadlali kumbe abaqeqeshi kuphela kepha wonke umuntu othintekayo ngisho nabaphathi imbala kumele bakugqoke ukuthi bamelwe ukusiza uhulumeni ekulweni nalesi sifo.
“Amaligi azoqala ekuqaleni kukaMashi (osekuyiinsuku ezimbalwa). Wonke amaqembu, ososeshini bonke kanjalo nezinhlaka zeSAFA ngokuhlukana kwezifunda bayanxuswa ukuthi bakwenze isiko ukulandela imigudu yokugwema ukubhebhethekisa lo mkhuhlane ngoba usudlule nabantu abaningi emhlabeni.
“Azocelwa wonke amaqembu ukuthi akuqobele phansi ukuphambana kwabadlali ngezinsuku zokuhlangana uma bezoziqeqesha kanjalo nasemidlalweni.
“Wonke amaqembu azophoqwa ukuthi abe nomshini wokuhlola ukushisa nokubanda komzimba (temperature scanner).
“Abalandeli abavunyelwe ukuzobuka uma amaqembu eziqeqesha kanjalo nasemidlalweni abakagunyazwa,” sisho kanje lesi sitatimende esikhishwe nguDominic Chimhavi oyinhloko yezokuxhumana kule nhlangano eyengamele ibhola laseNingizimu Afrika.
Ezakamuva, i-ABC Motsepe League
Previous Previous post: UReikerink akafuni ukusola izitobha zakhe ezibaqhathe nenduku kwiPirates
Next Next post: Uveza izizathu ezenza ashintshashintshe iqembu njalo uZinnbauer weBucs